kakar October 16, 2021
တခါတုနျးက ရှာတရှာမှာ အလှနျ သဘောကောငျးတဲ့ တောငျသူကွီး တယောကျရှိတယျ။ သူဟာ လူတဖကျသားကိုလညျး အလှနျသနားတတျပါသတဲ့။ တနတေ့ော့ နစေရာထိုငျစရာ မရှိလို့ ယောငျခြာခြာဖွဈနတေဲ့ လငျမယားနှဈယောကျကို ချေါလာပွီး သူ့ယာတဲလေးမှာ နထေိုငျခှငျ့ ပေးထားပါသတဲ့။
ဆနျ နဲ့ ဆီ၊ ဟငျးခကျြစရာ တှကေိုလညျး တလစာလောကျ ပေးလိုကျပါသေးတယျ။ နစေရာတဲလေးကလညျး အဆငျသငျ့ပါပဲ။ တဧကကြျောလောကျရှိတဲ့ ယာကှကျထဲမှာ သီးနှံလေးတှကေိုလညျး စိုကျခှငျ့ပေးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရဲ့ အိုစာမငျးစာအတှကျ ဆိုပွီး စိနျတလုံး သရကျပငျ၊ သံပုရာပငျနဲ့ ပိန်နဲပငျလို နှဈရှညျပငျ အခြို့ကို စိုကျခိုငျးပါသတဲ့။
ဘူး၊ ဖရုံ ၊ ငရုတျ၊ သခှားပငျတှေ ကိုတော့ သူတို့ဘာသာ စိုကျပွီး ရောငျးခစြားစေ ပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ လငျမယားနှဈယောကျဟာ ပွငျပကအလုပျလေးတှေ လုပျရငျး ယာကထှကျတဲ့ သီးနှံလေးတှေ ရောငျးရငျး စီးပှားရေးလေး အဆငျပွလောပါတယျ။ လငျမယားလေးနှဈယောကျဟာ သူတို့ရဲ့ ကြေးဇူးရှငျ တောငျသူကွီးကို ဝါဝငျ ဝါထှကျတိုငျး ကနျတော့တဲ့ အပွငျ ဟငျးလေးတှေ ကောငျးရငျလညျး ဦးဦးဖြားဖြား ပို့ပါတယျ။
စိနျတလုံး သရကျတှလေညျး သီးလို့ သံပုရာသီးတှလေညျး ဝလေို့ နခေငျြ့စဖှယျ ယာတဲလေး ဖွဈလာပါတယျ။ တောငျသူကွီးနဲ့ သူတို့လငျမယားဟာလညျး သားအဖတှသေဖှယျ ခဈြခငျလာကွ ပါသတဲ့။ တနတေ့ော့ တောငျသူကွီးဟာ သူတို့လငျမယားနှဈယောကျကို ချေါပွီး..
" မငျးတို့လငျမယားနှဈယောကျလညျး ငါ့ယာတဲလေးမှာနတော ၅ နှဈ ရှိပွီ ။ မငျးတို့စီးပှားရေးလေး လညျးအဆငျပွပွေီမို့ ငါလညျးအသကျကကွီး ငှလေညျးလိုနလေို့ ငါ့ယာတောလေးကို ရောငျးတော့မယျ ။ မငျးတို့ နစေရာ ရှာပါတော့ တလ အခြိနျပေးမယျ " လို့ ပွောပါသတဲ့။
လငျမယားနှဈယောကျ ယာတဲကို ပွနျရောကျတော့ မိနျးမဖွဈသူက ပွောပါသတဲ့။ " တောငျသူကွီး မတရားဘူး။ စိနျတလုံးတှေ သံပုရာတှသေီးလာမှ ကြှနျမတို့ကို နှငျထုတျတယျ။ တျောဒီအတိုငျးပဲ ငွိမျခံနမှောလား " လို့ပွောပါသတဲ့ ။
ယောင်ျကြားလုပျသူက " ဒီအတိုငျးတော့ ငွိမျခံမနနေိုငျဘူးဟေ့။ ဒို့စိုကျထားတဲ့ အပငျတှေ ဒို့ပွနျဖကျြဆီးရမယျ " ဆိုပွီး သရကျပငျတှေ၊သံပုရာပငျတှကေို အရငျးကနေ ခုတျလှဲပဈ ပါသတဲ့။ မိနျးမလုပျသူကလညျး ဘူး၊ ဖရုံ၊ ငရုတျ၊ သခှားပငျတှကေို အကုနျ ဖကျြဆီးပွဈ ပါသတဲ့။
နခေငျြ့စဖှယျ ယာတဲလေးဟာ သုဿနျတဆပွငျလို ခွောကျသှသှေ့ား ပါတော့တယျ။ သဈပငျတှေ အလဲလဲ အပွိုပွို၊ သီးပငျစားပငျတှေ ပကျြဆီးသှားတာကို ကွညျ့ရငျး လငျမယားနှဈယောကျ အလှနျ ကနြေပျနကွေ ပါသတဲ့။ " ခငျဗြား ဘာတတျနိုငျသေးလဲ " လို့တောငျ ကွိမျးဝါးလိုကျကွ ပါသေးတယျ။
အဲဒီညမှာတော့ အောငျသအေောငျသား အနနေဲ့ မှေးထားတဲ့ ကွကျကလေးကိုတောငျ ရိုကျခကျြ စားလိုကျပါသေးတယျ။ မိနျးမလုပျသူက " တောငျသူကွီးက သူ့အပငျတှေ ပကျြဆီးကုနျတာတှလေို့ ပွောရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲလို့ " မေးတော့ " မေးရဲရငျမေးကွညျ့လေ သူ့အပငျတှလေို အပိုငျးပိုငျး ဖွတျပဈမယျလို့ " ဒေါသတကွီး အျောဟဈလိုကျတယျ။
ဒေါသ ဦးဆောငျနတေဲ့သူနဲ့ မိတျဆှပွေုရတာ အလှနျ ကွောကျစရာကောငျးပါတယျ။ အဲဒီနကေ့ တောငျသူကွီး ရောကျမလာလို့ တျောပါသေးတယျ။ ရောကျလာလို့ မေးမိပွောမိရငျ မလှယျလောကျပါဘူး။ လငျမယားနှဈယောကျဟာ လောဘနဲ့ ဒေါသဦးဆောငျနတောကွောငျ့ မောဟဖုံးပွီး ကြေးဇူးတရားကို လုံးလုံး သတိမရကွတော့ပါဘူး။
ကြေးဇူးရှိမှ ကြေးစှပျတယျ ဆိုတာ သိပျမှနျတာပါပဲ။ လူတျောတျောမြာမြားဟာ သူတို့အတှကျ အကြိုးပွုနရေငျ သူတို့အတှကျ အသုံးခစြရာ ရှိနသေေးရငျ အဲဒီလူအပျေါ ကြေးဇူးတှေ သိတတျသလောကျ သူတို့ကို အကြိုးမပွုနိုငျတော့ရငျ အသုံးခလြို့ မရတော့ဘူး ဆိုရငျတော့ ကြေးစှပျဖို့ ဝနျမလေးတဲ့ အပွငျ အဆငျးမှာ တှနျးခဖြို့ ဝနျမလေးတဲ့ သူတှလေညျး ဖွဈသှားကွပါတော့တယျ။
လငျမယားနှဈယောကျဟာ သီးနှံပငျတှကေို ဖကျြဆီးရုံနဲ့တငျ အားမရသေးပါဘူး။ ဘာတှဆေကျပွီး ဖကျြဆီးရငျ ကောငျးမလဲလို့ တိုငျပငျကွပါတယျ။ " ကြူပျတို့ရောကျကာစက ဒီတဲလေးဟာ အခုလောကျမကောငျးသေးဘူး ၊ ကြူပျတို့ ပွငျထားလို့ ဒီလောကျကောငျးနတော ၊ ပွနျဖကျြပွဈရမယျ " လို့ မိနျးမက ပွောလိုကျတယျ ။ ယောကျြားလုပျသူကလညျး တဲကလေးကို ဖကျြဆီးပွဈလိုကျ ပါတော့တယျ ။
ယာတောတခုလုံး မွငျမကောငျးအောငျ ဖွဈသှားပါပွီ။ နောကျနမှေ့ာတော့ တောငျသူကွီးဟာ ရှာသူကွီးရယျ လူကွီးလေးယောကျရယျနဲ့အတူ ယာတောကို ရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ ယာတောကွီးတခုလုံး မွငျမကောငျးအောငျ ပကျြစီးနတောတှတေ့ော့ အလှနျ အံ့သွသှားခဲ့ပါတယျ။ မေးမိတော့ လငျမယားနှဈယောကျက
" ကြုပျတို့စိုကျတဲ့ အပငျနဲ့ ကြုပျတို့ ပွငျထားတဲ့တဲ.. ကြုပျတို့ ပွနျဖကျြဆီးတာ ဘာလုပျခငျြလဲလို့ " ရိုငျးစိုငျးစှာ ပွနျဖွကွေပါတယျ။ တောငျသူကွီးက " မိုကျလိုကျကွတာကှယျ ငါက မနကေ့ ဆုံးဖွတျခကျြ ပွောငျးခဲ့တယျ။ ငါ သာသနာ့ဘောငျ အပွီးဝငျတော့မှာမို့ ဒီယာတောကို မငျးတို့ အမညျနဲ့ အပွီး လှဲခဲ့မယျ ဆိုပွီး သူကွီးရယျ ရပျမိရပျဖတှရေယျ ချေါလာခဲ့တာကှဲ့ "
" ဗြာ ကနြျောတို့ကို ပေးခဲ့မယျ ဟုတျလား?? " လငျမယားနှဈယောကျ ခြုံးပှဲခြ ငိုပါတော့တယျ။ တောငျသူကွီးက ခှငျ့လှတျပွီး ယာတောကိုပေးခငျြပမေဲ့ သူကွီးနဲ့ ရှာသားတှကေ ကြေးဇူးမဲ့တတျ ဒုစရိုကျဆနျလှတဲ့ လငျမယားကို ပေးဖို့ သဘောမတူကွောငျး အကွီးအကယျြကနျ့ကှကျကွလို့ ဘုနျးကွီးကြောငျးကိုပဲ လှူဖွဈသှားခဲ့ပါတော့တယျ။ ရှာသားတှကေ လငျမယားနှဈယောကျကို ခှေးမောငျးသလို နှငျထုတျခဲ့ကွ ပါတယျ။
" သူ့၏ အကွိုကျ ၁၀ ခါ လိုကျလညျး၊ မလိုကျတခါ ရှိခဲ့ပါမူ ကွီးစှာရနျသူ စှဲမှတျယူပုံ "
တခါတုန်းက ရွာတရွာမှာ အလွန် သဘောကောင်းတဲ့ တောင်သူကြီး တယောက်ရှိတယ်။ သူဟာ လူတဖက်သားကိုလည်း အလွန်သနားတတ်ပါသတဲ့။ တနေ့တော့ နေစရာထိုင်စရာ မရှိလို့ ယောင်ချာချာဖြစ်နေတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ကို ခေါ်လာပြီး သူ့ယာတဲလေးမှာ နေထိုင်ခွင့် ပေးထားပါသတဲ့။
ဆန် နဲ့ ဆီ၊ ဟင်းချက်စရာ တွေကိုလည်း တလစာလောက် ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ နေစရာတဲလေးကလည်း အဆင်သင့်ပါပဲ။ တဧကကျော်လောက်ရှိတဲ့ ယာကွက်ထဲမှာ သီးနှံလေးတွေကိုလည်း စိုက်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အိုစာမင်းစာအတွက် ဆိုပြီး စိန်တလုံး သရက်ပင်၊သံပုရာပင်နဲ့ ပိန္နဲပင်လို နှစ်ရှည်ပင် အချို့ကို စိုက်ခိုင်းပါသတဲ့။
ဘူး၊ ဖရုံ ၊ ငရုတ်၊ သခွားပင်တွေ ကိုတော့ သူတို့ဘာသာ စိုက်ပြီး ရောင်းချစားစေ ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ ပြင်ပကအလုပ်လေးတွေ လုပ်ရင်း ယာကထွက်တဲ့ သီးနှံလေးတွေ ရောင်းရင်း စီးပွားရေးလေး အဆင်ပြေလာပါတယ်။ လင်မယားလေးနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် တောင်သူကြီးကို ဝါဝင် ဝါထွက်တိုင်း ကန်တော့တဲ့ အပြင် ဟင်းလေးတွေ ကောင်းရင်လည်း ဦးဦးဖျားဖျား ပို့ပါတယ်။
စိန်တလုံး သရက်တွေလည်း သီးလို့ သံပုရာသီးတွေလည်း ဝေလို့ နေချင့်စဖွယ် ယာတဲလေး ဖြစ်လာပါတယ်။ တောင်သူကြီးနဲ့ သူတို့လင်မယားဟာလည်း သားအဖတွေသဖွယ် ချစ်ခင်လာကြ ပါသတဲ့။ တနေ့တော့ တောင်သူကြီးဟာ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး
" မင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လည်း ငါ့ယာတဲလေးမှာနေတာ ၅ နှစ် ရှိပြီ ။ မင်းတို့စီးပွားရေးလေး လည်းအဆင်ပြေပြီမို့ ငါလည်းအသက်ကကြီး ငွေလည်းလိုနေလို့ ငါ့ယာတောလေးကို ရောင်းတော့မယ် ။ မင်းတို့ နေစရာ ရှာပါတော့ တလ အချိန်ပေးမယ် " လို့ ပြောပါသတဲ့။
လင်မယားနှစ်ယောက် ယာတဲကို ပြန်ရောက်တော့ မိန်းမဖြစ်သူက ပြောပါသတဲ့။ " တောင်သူကြီး မတရားဘူး။ စိန်တလုံးတွေ သံပုရာတွေသီးလာမှ ကျွန်မတို့ကို နှင်ထုတ်တယ်။ တော်ဒီအတိုင်းပဲ ငြိမ်ခံနေမှာလား " လို့ပြောပါသတဲ့ ။
ယောင်္ကျားလုပ်သူက " ဒီအတိုင်းတော့ ငြိမ်ခံမနေနိုင်ဘူးဟေ့။ ဒို့စိုက်ထားတဲ့ အပင်တွေ ဒို့ပြန်ဖျက်ဆီးရမယ် " ဆိုပြီး သရက်ပင်တွေ၊သံပုရာပင်တွေကို အရင်းကနေ ခုတ်လှဲပစ် ပါသတဲ့။ မိန်းမလုပ်သူကလည်း ဘူး၊ ဖရုံ၊ ငရုတ်၊ သခွားပင်တွေကို အကုန် ဖျက်ဆီးပြစ် ပါသတဲ့။
နေချင့်စဖွယ် ယာတဲလေးဟာ သုဿန်တဆပြင်လို ခြောက်သွေ့သွား ပါတော့တယ်။ သစ်ပင်တွေ အလဲလဲ အပြိုပြို၊ သီးပင်စားပင်တွေ ပျက်ဆီးသွားတာကို ကြည့်ရင်း လင်မယားနှစ်ယောက် အလွန် ကျေနပ်နေကြ ပါသတဲ့။ " ခင်ဗျား ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ " လို့တောင် ကြိမ်းဝါးလိုက်ကြ ပါသေးတယ်။
အဲဒီညမှာတော့ အောင်သေအောင်သား အနေနဲ့ မွေးထားတဲ့ ကြက်ကလေးကိုတောင် ရိုက်ချက် စားလိုက်ပါသေးတယ်။ မိန်းမလုပ်သူက " တောင်သူကြီးက သူ့အပင်တွေ ပျက်ဆီးကုန်တာတွေ့လို့ ပြောရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ " မေးတော့ " မေးရဲရင်မေးကြည့်လေ သူ့အပင်တွေလို အပိုင်းပိုင်း ဖြတ်ပစ်မယ်လို့ " ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်လိုက်တယ်။
ဒေါသ ဦးဆောင်နေတဲ့သူနဲ့ မိတ်ဆွေပြုရတာ အလွန် ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ အဲဒီနေ့က တောင်သူကြီး ရောက်မလာလို့ တော်ပါသေးတယ်။ ရောက်လာလို့ မေးမိပြောမိရင် မလွယ်လောက်ပါဘူး။ လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ လောဘနဲ့ ဒေါသဦးဆောင်နေတာကြောင့် မောဟဖုံးပြီး ကျေးဇူးတရားကို လုံးလုံး သတိမရကြတော့ပါဘူး။
ကျေးဇူးရှိမှ ကျေးစွပ်တယ် ဆိုတာ သိပ်မှန်တာပါပဲ။ လူတော်တော်မျာများဟာ သူတို့အတွက် အကျိုးပြုနေရင် သူတို့အတွက် အသုံးချစရာ ရှိနေသေးရင် အဲဒီလူအပေါ် ကျေးဇူးတွေ သိတတ်သလောက် သူတို့ကို အကျိုးမပြုနိုင်တော့ရင် အသုံးချလို့ မရတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ကျေးစွပ်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ အပြင် အဆင်းမှာ တွန်းချဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ သူတွေလည်း ဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်။
လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ သီးနှံပင်တွေကို ဖျက်ဆီးရုံနဲ့တင် အားမရသေးပါဘူး။ ဘာတွေဆက်ပြီး ဖျက်ဆီးရင် ကောင်းမလဲလို့ တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ " ကျူပ်တို့ရောက်ကာစက ဒီတဲလေးဟာ အခုလောက်မကောင်းသေးဘူး ၊ ကျူပ်တို့ ပြင်ထားလို့ ဒီလောက်ကောင်းနေတာ ၊ ပြန်ဖျက်ပြစ်ရမယ် " လို့ မိန်းမက ပြောလိုက်တယ် ။ ယောက်ျားလုပ်သူကလည်း တဲကလေးကို ဖျက်ဆီးပြစ်လိုက် ပါတော့တယ် ။
ယာတောတခုလုံး မြင်မကောင်းအောင် ဖြစ်သွားပါပြီ။ နောက်နေ့မှာတော့ တောင်သူကြီးဟာ ရွာသူကြီးရယ် လူကြီးလေးယောက်ရယ်နဲ့အတူ ယာတောကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ယာတောကြီးတခုလုံး မြင်မကောင်းအောင် ပျက်စီးနေတာတွေ့တော့ အလွန် အံ့သြသွားခဲ့ပါတယ်။ မေးမိတော့ လင်မယားနှစ်ယောက်က
" ကျုပ်တို့စိုက်တဲ့ အပင်နဲ့ ကျုပ်တို့ ပြင်ထားတဲ့တဲ.. ကျုပ်တို့ ပြန်ဖျက်ဆီးတာ ဘာလုပ်ချင်လဲလို့ " ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြန်ဖြေကြပါတယ်။ တောင်သူကြီးက " မိုက်လိုက်ကြတာကွယ် ငါက မနေ့က ဆုံးဖြတ်ချက် ပြောင်းခဲ့တယ်။ ငါ သာသနာ့ဘောင် အပြီးဝင်တော့မှာမို့ ဒီယာတောကို မင်းတို့ အမည်နဲ့ အပြီး လွဲခဲ့မယ် ဆိုပြီး သူကြီးရယ် ရပ်မိရပ်ဖတွေရယ် ခေါ်လာခဲ့တာကွဲ့ "
" ဗျာ ကျနော်တို့ကို ပေးခဲ့မယ် ဟုတ်လား?? " လင်မယားနှစ်ယောက် ချုံးပွဲချ ငိုပါတော့တယ်။ တောင်သူကြီးက ခွင့်လွှတ်ပြီး ယာတောကိုပေးချင်ပေမဲ့ သူကြီးနဲ့ ရွာသားတွေက ကျေးဇူးမဲ့တတ် ဒုစရိုက်ဆန်လှတဲ့ လင်မယားကို ပေးဖို့ သဘောမတူကြောင်း အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ကြလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပဲ လှူဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ရွာသားတွေက လင်မယားနှစ်ယောက်ကို ခွေးမောင်းသလို နှင်ထုတ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
" သူ့၏ အကြိုက် ၁၀ ခါ လိုက်လည်း၊ မလိုက်တခါ ရှိခဲ့ပါမူ ကြီးစွာရန်သူ စွဲမှတ်ယူပုံ "